सरकार ढल्ने छाँटकाँट देखिएपछि बालुवाटारमा औडाहा, ओलीसँग गरिएको सहमति 'ढुस' हुने महन्थको चिन्ता - Sutra News
माधव समूहलाई ओलीले भने- आफ्नो पार्टी फुटाएर विरोधीहरूका स्वार्थलाई मलजल
काठमाडौँ - कर्णाली प्रदेशमा एमालेमा ४ सांसदले 'फ्लोर क्रस' गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि बालुवाटार झस्केको छ । केन्द्रमा पनि एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारका विरुद्धमा मतदान गर्ने आंकलन गर्दै यतिबेला बालुवाटार सघन छलफलमा जुटेको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई लिएर सरकारलाई कम्फर्टेबल ढंगले चलाउने रणनीति लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीमा आफ्नै पार्टीबाट फ्लोर क्रस होला भन्ने सोचेका थिएनन् । कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूले 'ओलीलाई धूलो चटाउने' प्रतिक्रिया दिएपछि बालुवाटारमा औडाहा भएको छ ।
शनिवारको सर्वदलीय बैठकअघि ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई बोलाएर अबको रणनीतिका बारेमा छलफल गरेका थिए । निकटस्थहरूले माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई कारवाही गर्न सुझाव दिए । ओलीले उक्त सुझावलाई सकारात्मक ढंगबाट लिएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया भने सजिलो छैन ।
गत फागुन २८ गते ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकका नाममा आफूनिकट नेता कार्यकर्तालाई मात्र बोलाएर समानुपातिक सांसदलाई कारवाही गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
यतिबेला खनाल-नेपाल पक्षमा ३९ सांसद छन् । सबैलाई कारवाही गर्ने हो भने १२० सीट भएको एमाले ९० सीटमा झर्छ । त्यसपछि बहुमतका लागि चाहिने मत जसपालाई साथ लिए पनि ओलीलाई प्राप्त हुन सम्भव छैन ।
कुनै न कुनै हिसाबले जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो वरिपरी घुमाइरहेका ओलीलाई आफ्नै सांसदहरूले विश्वासको मत दिने अवस्था नहुँदा ओली सरकार ढल्ने लगभग निश्चितजस्तै देखिएको हो ।
गत बिहीवार ओलीले बालुवाटारमा कर्णाली प्रदेशका आफूनिकट सांसदहरूलाई बोलाएर पार्टीको अवस्थाबारे सोधेका थिए । छलफलमा सहभागी राजबहादुर बुढाले पार्टीको अवस्था राम्रो नभएको भन्दै आफूले ओलीलाई ब्रिफिङ गरेको जानकारी दिए ।
'पार्टी फूटको अवस्थामै रहे अबको चुनावमा एक सिट पनि जित्न सकिन्न,' ओलीसँग आफूले राखेको धारणा बताउँदै बुढाले भने, 'पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि लैजाने काम अध्यक्षका नाताले उहाँले नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय हो ।'
२०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर लगभग दुईतिहाइ ल्याउन सफल भएको तथ्य स्मरण गरेको बुढाले बताए । '४० जति निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो र कांग्रेसको मत अन्तर १ हजारको हाराहारीमा छ,' उनले भने, 'यो तथ्यलाई प्रधानमन्त्री आफैंले बुझ्नुभएको होला ।'
माधव समूहका नेतालाई गरेको कारवाहीले गरेको 'ब्याकफायर'
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते साविकको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो । सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमालेको अस्तित्व फिर्ता भएपछि ओलीले आफ्ना पार्टीका नेताहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने थियो । तर प्रतिशोधको आगोमा जलेका ओलीले नेपाल-खनाल समूहका ४ जनालाई स्पष्टिकरण सोधे र पार्टीको सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरे ।
त्यसपछि खनाल-नेपाल समूहले देशव्यापी समानान्तर कमिटीको अभ्यास झनै द्रूतगतिमा गर्यो । कर्णालीमा ४ जनाले फ्लोर क्रस गर्नु ओलीले गरेको त्यही कारवाहीको परिणाम थियो ।
'प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई पूर्ववत ढंगबाट अघि लिएर जानुभएको भए अहिले यो अप्ठेरो अवस्था आउने थिएन,' नेपाल समूहका एक नेताले सूत्रन्यूजसँग भने, '२०७५ सालको जेठ २ गतेभन्दा पहिलाको अवस्थाबाट सबै कुराको शुरुवात गर्नुपर्थ्यो । बरू उहाँले प्रतिशोधी भावना लिएर आफूविरुद्धमा लागेको भन्दै कतिपय नेताहरूलाई कारवाही गरिदिए ।
के केन्द्रमा पनि फ्लोर क्रस हुन सक्छ ?
जसपाका मागहरू पूरा गराइदिने भन्दै नेताहरूलाई इन्गेज गराइरहेका ओलीले भुइँको टिप्दा गोजीको गुमाउने सम्भावना बढेको छ । ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा या ओली स्वयंले विश्वासको मत लिन चाहँदा नेपाल समूहका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने आंकलन बालुवाटारले गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले 'फाइनल कार्ड ओपन' गर्न थालिएको बताएका छन् । उनले एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीविरुद्धको गठबन्धन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको बताएका हुन् ।
पुनको फाइनल कार्ड ओपन हुने अभिव्यक्तिले दुईवटा अर्थ दिन्छ । पहिलो हो ओलीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छन् । पुनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि नयाँ सरकार बनाउन सकारात्मक भएको संकेत गरे ।
केही दिनअघि सम्म आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन उदासीन देखिएका देउवा पछिल्लो समयमा ओलीविरुद्ध बन्ने महागठबन्धनमा रुची र चासो देखाउन थालेका छन् । उनले पटक-पटक प्रचण्ड र अन्य नेताहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छन् ।
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइहालेमा एमालेका नेपाल समूहका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्ने निश्चित भएसँगै जसपा हच्किएको छ । सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याइरहेको जसपा एमालेभित्रैको विग्रह देखेर आफ्नो पोजिसन गुम्ने चिन्तामा फँसेको छ ।
जसपासँग गर्ने भनिएको सम्झौता 'ढुस' !
केही दिनअघि सूत्रन्यूजसँग कुरा गर्दै जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ओली र आफूहरूबीच अर्ली इलेक्सनमा लगभग सहमति भएको बताएका थिए ।
'२०७८ भित्रै अर्ली इलेक्सन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ,' ठाकुरले भने, 'हामीले त्यसमा मोटामोटी सहमति जनाएका छौं । त्यसपछि संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन हुने कुराकानी पनि छ । मधेश मुद्दाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, सरकारले कार्यदल गठन गरेर काम पनि गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले चुनावसम्म सँगै मिलेर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।'
तर कर्णाली प्रदेशमा एमालेकै सांसदहरूले कारवाहीको डर नमानिकन फ्लोर क्रस गरेको देखेपछि जसपा हच्किएको छ । शनिवार ठाकुरले यसबारेमा केही नबोल्ने बताएर पन्छिए ।
यदि केन्द्रमा एमालेको नेपाल-खनाल समूहका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर ओलीलाई समर्थन छैन भनिदिए भने ओली र ठाकुरबीच भएको सहमति ढुस हुने सम्भावना देखिन्छ । नयाँ बन्ने सरकारले ओली र ठाकुरबीच भएको सहमतिको अपनत्व लिन बाध्य हुनेछैन ।
प्रकाशित :बैशाख ४, २०७८ शनिवार - १२:५८:०१